Kulan Baroordiiq ah oo ka dhacay caasimada Sweden Stockholm oo loo sameeyay Aadan Wiish iyo Saciid Mugaanbe | Anti-Tribalism
← Dowladda KMG ah oo maanta Garoonka Diyaaradaha ka duulisay Dhaawaca Xildhibaan Mowliid Macaani iyo sarkaal ka tirsan dowladda KMG ah.
Munaasabad ALLA BARI ah oo loogu duceeynayay dadkii lagu laayay qarixii TIYAATARKA oo lagu qabtay GOTHENBURG. →
Kulan Baroordiiq ah oo ka dhacay caasimada Sweden Stockholm oo loo sameeyay Aadan Wiish iyo Saciid Mugaanbe
April 07, 2012 (MMG) – Waxaa maalintii shalay aheyd ka dhacday munaasabad baroordiiq ah oo loogu talagalay tacsidii naxdinta laheyd allaha u naxariistee labadii masuul Aadan Xaaji yabaroow iyo Saciid Mugaanbe iyo intii kaloo ku waxyeeloowday qaraxii naxdinta lahaa ee ka dhacay tiyaatarka qaranka bisha afarteedii.
Munaasabadaas oo looga kala yimid dhamaan gobolada Sweden iyo wadamda deriska iyo Yurub, iyadoo jawigu uu ka muuqday murugo iyo tiiraanyo aan xad laheyn. Waxaa goobta isugu yimid masuuliyiin iyo madax ka kala socotay jaaliyadaha soomaalida eey ugu horeeyaan bahada Isboortiga soomaaliyeed.
Madaxdii kasoo qeybgashay waxaa kamid ahaa Cabdi cade oo horey u ahaan jiray gudoomiye kuxigeenka xiriirka kubbada cagta, waxaa kaloo kamid ahaa Bashiir Jeenyo, sidoo kale Axmad Diinaash, Sabriye Gaaboow Maxamad Muuse, Xamdi Shiiq, Col. Maxamad Deeqow Macalin (Jaksan), Macoow Xuseen iyo Qaaluu Salaama, Xiirey Rooble, Dhabareey.
Waxaa kaloo kasoo qeybgalay xildhibaano sida Drs Amino Saciid, Xildhibaan Cukaashe . Sidoo kale waxaa Ururada iyo daladaha wadanka Sweden ka socday urur weyna soomaalida ee Sweden oo uu u hadlay Xoghayaha warfaafinta Mudane Ibraahim Xaan Qalinle, ururka Xaawo taako (Sahro Barqadle).
Run ahaantii laguma soo koobi karo halkan kasoo qeybgalayaasha tacsida hase ahaatee waxaa meesha loogu duceeyay labada marxuum lagana sheekeeyay taariiqda eey ku lahaayeen ummada soomaaliyeed dhexdooda.